တရုတ်၏ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော တိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်မှု သုံးသပ်ချက် - Knowledgeworms
February 4, 2021 February 4, 2021 AuroraLeaveaComment on တရုတ်၏ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော တိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်မှု သုံးသပ်ချက်
USS Theodore Roosevelt လေယာဉ်တင်သင်္ဘော တောင်တရုတ် ပင်လယ် ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ၎င်းကဲ့သို့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်သည့် ပုံစံ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့် သိပ်မဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာ လေယာဉ်ပေါင်း ၁၃ စီးကိုအသုံးပြုထားပြီး YJ-12 သင်္ဘောဖျက်ဒုံးများတပ်ဆင်ထားတဲ့ H-6 ဗျူဟာမြောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ် ၈ စီးပါဝင်ပါတယ်။ YJ-12 ဟာ အသံထက် ၃ ဆ မှ ၄ ဆ အမြန်နှုန်းဖြင့် ၂၄၈ မိုင်အထိ ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
YJ-12 အား ထရပ်ကားပေါ်တွင် တင်ဆောင်ထားစဉ်
H-6 တွေဟာ YJ-12 ပေါင်း ၆ ခုလောက် အထိ တင်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် သီအိုရီအရ သင်္ဘောဖျက်ဒုံး ၄၈ လုံးအထိ တင်ဆောင်စစ်ဆင်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်တွေကို J-16 တိုက်လေယာဉ် ၄ စီးမှ ခြံရံလိုက်ပါ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် အလက်စကာပြည်နယ်နှင့် ရုရှားတို့မှာ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသောကြောင့် ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ အမြဲလိုလို ပုံမှန်ဖြတ်သန်းလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နယ်စပ်စည်းနှင့် နီးကပ်လာလို့ ကြားဖြတ်တဲ့အခါ ဗုံးကြဲလေယာဉ် တစ်စီး သို့မဟုတ် နှစ်စီးထက် ပိုပြီး မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုပျံသန်းမှုကို စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အနေဖြင့် သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
ယခုလို ဗုံးကြဲလေယာဉ် ၈ စီးကို ပျံသန်းလာခြင်းကတော့ လေ့ကျင့်သည့် ပုံစံထက်ကျော်လွန်ကာ တကယ့်အနေအထားအထိ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်တို့ဟာ လေ့ကျင့်ချိန်အတွင်း အနည်းငယ် နောက်ဆုတ်သွားပေမယ့် အကွာအဝေးကိုတော့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအုပ်စုကို မစ်ဇိုင်းများရောက်ရှိနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဒါ့ကြောင့်မလို့ ဒီလိုလေကျင့်မှုဟာ အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအုပ်စုအတွက် အတော်ကို ကသိကအောက် ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီစစ်ဆင်ရေးသာ တကယ့်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ရင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေဟာ ကာကွယ်နိုင်မှာလား?
YJ-12 တွေဟာ တကယ်ကို‌ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မစ်ဇိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ သုံးသပ်ချက်က ဒီလိုပါ။
ပထမဆုံး လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေမှာ သင်္ဘောကို ကာကွယ်ဖို့ရာ E-2D Hawkeye ကြိုတင်သိပေးမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုလေယာဉ်ပါရှိပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်ဟာ ကင်းလှည့်နေမှာပါ။ အဲဒီ့ E-2D လေယာဉ်တွေဟာ ရေဒါပျောက်မဟုတ်တဲ့ တရုတ်လေယာဉ်တွေကို မိုင်ရာပေါင်းများစွာကနေ ကောင်းကောင်း ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဆီ တရုတ်လေယာဉ်တွေ ပျံသန်းလာပါက F/A-18 တွေဟာ ချက်ချင်း ကြားဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စီးမှာ F/A-18 တိုက်လေယာဉ်ပေါင်း ၄၀ ကနေ ၄၄ စီးအထိ အနည်းဆုံး ပါဝင်ပါတယ်။
ကိစ္စ တော်တော်များများမှာတော့ ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်တွေက တရုတ်လေယာဉ်အုပ် တစ်ခုလုံးကို ပစ်ချနိုင်မှာပါ။
တကယ်လို့ H-6 ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေက YJ-12 တွေကို ပစ်လွှတ်နိုင်သည် ဆိုပါစို့
အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနဲ့ သူ့ရဲ့ အမှုထမ်း ၆၀၀၀ ကျော်မှာ အန္တရာယ် တကယ်ကို ရှိလာမှာပါ။ YJ-12 ဟာ ပင်လယ်ပြင်မှ ပစ်ခတ်ဖို့ အထူးထုတ်လုပ်ထားတာပါ။
ဆိုလိုတာကတော့ ဒီ မစ်ဇိုင်းဟာ ရေဒါကိုရှောင်ကွင်းနိုင်ဖို့ ပင်လယ်မျက်နှာပြင်နှင့် နီးကပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ ရေဒါဆိုသည်မှာ Line of sight လို့ခေါ်တဲ့ တဖြောင့်တည်းသာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးဟာ လုံးဝန်းနေတဲ့အတွက် အနိမ့်ပျံသန်းလာတဲ့အရာတွေကို ရေဒါက ဖမ်းယူဖို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒီမစ်ဇိုင်းဟာ မိုင် ၂၅၀ လောက်အကွာအဝေးက ပစ်တာဖြစ်ပေမယ့် အနိမ့်ပျံနိုင်ပြီး အသံထက် ၃-၄ ဆလောက်မြန်တာကြောင့် ၂၅ မိုင် သို့မဟုတ် အဲဒီ့ထက်နည်းတဲ့ အကွာအဝေးမှ စတင် မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
အဲဒီ့အချိန်ကျရင် ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန် တစ်မိနစ်အောက်သာ ရပါတော့တယ်။
ပုံမှန်အခြေအနေမှာတော့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအုပ်စုမှာ ပဲထိန်းဒုံးတင် ခရူဇာသင်္ဘော တစ်စီး နှင့် ဖျက်သင်္ဘော ၂ စီး သို့မဟုတ် ၂ စီးထက်ပိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ရေတပ်၏ ပူးပေါင်းရှာဖွေမှုစွမ်းရည်အသစ် အရ E-2D များက အမြင့်ပေများစွာမှ ပျံသန်းပြီး YJ-12 တွေကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဆီ မရောက်ခင် အကွာအဝေး များစွာမှနေပြီး အားလုံးကို ပစ်ချနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
USS Theodore Roosevelt ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၎ကဲ့သို႔ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို တိုက္ခိုက္သည့္ ပုံစံ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွင့္ သိပ္မေဝးကြာတဲ့ ေနရာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီေလ့က်င့္မႈမွာ ေလယာဥ္ေပါင္း ၁၃ စီးကိုအသုံးျပဳထားၿပီး YJ-12 သေဘၤာဖ်က္ဒုံးမ်ားတပ္ဆင္ထားတဲ့ H-6 ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ ၈ စီးပါဝင္ပါတယ္။ YJ-12 ဟာ အသံထက္ ၃ ဆ မွ ၄ ဆ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ၂၄၈ မိုင္အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ H-6 ေတြဟာ YJ-12 ေပါင္း ၆ ခုေလာက္အထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သီအိုရီအရ သေဘၤာဖ်က္ဒုံး ၄၈ လုံးအထိ တင္ေဆာင္စစ္ဆင္တဲ့ ေလ့က်င့္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေလယာဥ္ေတြကို J-16 တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စီးမွ ၿခံရံလိုက္ပါ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ အလက္စကာျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔မွာ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား အၿမဲလိုလို ပုံမွန္ျဖတ္သန္းေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ နယ္စပ္စည္းႏွင့္ နီးကပ္လာလို႔ ၾကားျဖတ္တဲ့အခါ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ တစ္စီး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စီးထက္ ပိုၿပီး မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိုပ်ံသန္းမႈကို စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။
ယခုလို ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ ၈ စီးကို ပ်ံသန္းလာျခင္းကေတာ့ ေလ့က်င့္သည့္ ပုံစံထက္ေက်ာ္လြန္ကာ တကယ့္အေနအထားအထိ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
တ႐ုတ္တို႔ဟာ ေလ့က်င့္ခ်ိန္အတြင္း အနည္းငယ္ ေနာက္ဆုတ္သြားေပမယ့္ အကြာအေဝးကိုေတာ့ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စုကို မစ္ဇိုင္းမ်ားေရာက္ရွိႏိုင္တဲ့ အကြာအေဝးအတြင္းမွာပဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ ဒီလိုေလက်င့္မႈဟာ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စုအတြက္ အေတာ္ကို ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ဒီစစ္ဆင္ေရးသာ တကယ့္စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ရင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေတြဟာ ကာကြယ္ႏိုင္မွာလား?
YJ-12 ေတြဟာ တကယ္ကို‌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မစ္ဇိုင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သုံးသပ္ခ်က္က ဒီလိုပါ။
ပထမဆုံး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေတြမွာ သေဘၤာကို ကာကြယ္ဖို႔ရာ E-2D Hawkeye ႀကိဳတင္သိေပးမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလယာဥ္ပါရွိပါတယ္။ ဒီေလယာဥ္ဟာ ကင္းလွည့္ေနမွာပါ။ အဲဒီ့ E-2D ေလယာဥ္ေတြဟာ ေရဒါေပ်ာက္မဟုတ္တဲ့ တ႐ုတ္ေလယာဥ္ေတြကို မိုင္ရာေပါင္းမ်ားစြာကေန ေကာင္းေကာင္း ေထာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဆီ တ႐ုတ္ေလယာဥ္ေတြ ပ်ံသန္းလာပါက F/A-18 ေတြဟာ ခ်က္ခ်င္း ၾကားျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီးမွာ F/A-18 တိုက္ေလယာဥ္ေပါင္း ၄၀ ကေန ၄၄ စီးအထိ အနည္းဆုံး ပါဝင္ပါတယ္။
ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေလ့က်င့္ထားတဲ့ အေမရိကန္ တိုက္ေလယာဥ္ေတြက တ႐ုတ္ေလယာဥ္အုပ္ တစ္ခုလုံးကို ပစ္ခ်ႏိုင္မွာပါ။
တကယ္လို႔ H-6 ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ေတြက YJ-12 ေတြကို ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည္ ဆိုပါစို႔
အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အမႈထမ္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အႏၲရာယ္ တကယ္ကို ရွိလာမွာပါ။ YJ-12 ဟာ ပင္လယ္ျပင္မွ ပစ္ခတ္ဖို႔ အထူးထုတ္လုပ္ထားတာပါ။
ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီ မစ္ဇိုင္းဟာ ေရဒါကိုေရွာင္ကြင္းႏိုင္ဖို႔ ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေရဒါဆိုသည္မွာ Line of sight လို႔ေခၚတဲ့ တေျဖာင့္တည္းသာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
ကမာၻႀကီးဟာ လုံးဝန္းေနတဲ့အတြက္ အနိမ့္ပ်ံသန္းလာတဲ့အရာေတြကို ေရဒါက ဖမ္းယူဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒီမစ္ဇိုင္းဟာ မိုင္ ၂၅၀ ေလာက္အကြာအေဝးက ပစ္တာျဖစ္ေပမယ့္ အနိမ့္ပ်ံႏိုင္ၿပီး အသံထက္ ၃-၄ ဆေလာက္ျမန္တာေၾကာင့္ ၂၅ မိုင္ သို႔မဟုတ္ အဲဒီ့ထက္နည္းတဲ့ အကြာအေဝးမွ စတင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။
အဲဒီ့အခ်ိန္က်ရင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္ တစ္မိနစ္ေအာက္သာ ရပါေတာ့တယ္။
ပုံမွန္အေျခအေနမွာေတာ့ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စုမွာ ပဲထိန္းဒုံးတင္ ခ႐ူဇာသေဘၤာ တစ္စီး ႏွင့္ ဖ်က္သေဘၤာ ၂ စီး သို႔မဟုတ္ ၂ စီးထက္ပိုၿပီး ပါဝင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ေရတပ္၏ ပူးေပါင္းရွာေဖြမႈစြမ္းရည္အသစ္ အရ E-2D မ်ားက အျမင့္ေပမ်ားစြာမွ ပ်ံသန္းၿပီး YJ-12 ေတြကို ရွာေဖြႏိုင္တဲ့အတြက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဆီ မေရာက္ခင္ အကြာအေဝး မ်ားစြာမွေနၿပီး အားလုံးကို ပစ္ခ်ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Tagged aircraft carrierChina NavyUS Navy
July 10, 2021 July 10, 2021 Aurora